Tsy misy fizahan-tany, tsy misy COVID, fa afaka ihany amin'ny farany: ny Repoblikan'i Nauru
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Nauru Breaking News » Tsy misy fizahan-tany, tsy misy COVID, fa afaka ihany amin'ny farany: ny Repoblikan'i Nauru
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Nauru Breaking News • Vaovao • People • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Tsy dia misy toerana maro eto amin'ity izao tontolo izao ity, izay mbola tsy nanjary olana ny COVID, ary afaka COVID. Ny iray dia ny Nosy Repoblikan'i Nauru.
Nauru dia mbola tsy misy dikany amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena.
Nauru dia nosy kely ary firenena mahaleo tena avaratra atsinanan'i Aostralia. Any amin'ny 42 kilometatra atsimon'ny ekoatera no misy azy, ary haran-dranomasina no manodidina ny nosy iray manontolo izay tototry ny tendrony ..
Mponina - eo amin'ny 10,000 eo ho eo, anisan'izany ny mponina tsy-Nauruan. 1,000
Tsy misy tranga Coronavirus ao amin'ny firenena, fa ny governemanta amerikana dia manome sosokevitra ny hanaovana vaksiny rehefa mandeha any Nauru izy
Rehefa mijery ny statistikan'izao tontolo izao momba ny Coronavirus dia firenena tsy miankina iray no tsy eo foana. Ity firenena ity dia ny Repoblikan'i Nauru. Nauru dia repoblika nosy any amin'ny Oseana Pasifika atsimo
Ny mponin'i Nauru dia misy foko 12, asehoan'ny kintana 12 mariky ny saina Nauru, ary inoana fa fifangaroan'ny razamben'ny Micronesian, Polynesian ary Melanesiana. Ny tenin-drazan'izy ireo dia Nauruan fa ny teny anglisy dia be mpampiasa satria ampiasaina amin'ny tanjona ara-panjakana sy ara-barotra. Ny foko tsirairay dia samy manana ny sefony avy.
Ny Nauru Flag dia tsotra sy tsotra, miaraka amin'ny lokon'ny Navy Blue, Yellow ary White. Samy manana ny lanjany ny loko tsirairay. Ny Navy Blue dia maneho ny ranomasina manodidina an'i Nauru. Ny tsipika mavo dia eo afovoan'ny Equator satria i Nauru dia eo akaikin'ny Equator ary izany no mahamay be Nauru. Ilay kintana fotsy 12 dia mijoro ho an'ny foko 12 an'ny People of Nauru.
Izany no mahatonga ny sainam-pirenena Nauruan miloko toy izao.
Ny famerenana ny fitrandrahana fosfat sy fanondranana amin'ny taona 2005 dia nanome ny toekarenan'i Nauru fanentanana tena nilaina. Ny tahiry faharoa amin'ny phosphate dia manana tombana sisa tavela mandritra ny 30 taona.
Nahitana tahiry phosphate manankarena tamin'ny taona 1900 ary ny taona 1907 ny Pacific Phosphate Company dia nandefa ny phosfat fandefasana voalohany tany Aostralia. Mandrak'androany dia ny fitrandrahana fosfateo no mbola loharano fidiram-bolan'i Nauru.
Ny 31 Janoary dia fetin'ny fahaleovan-tena (Hiverina amin'ny tsingerintaonan'ny Truk)
Ity fetim-pirenena ity dia ankalazain'ny governemanta, mikarakara lalao sy fifaninanana am-pihira ho an'ireo departemanta sy zava-maneno isan-karazany amin'ny governemanta. Ary koa, misy fanasana iray natao ho an'ny tanora am-po. (Izay velona indrindra tao Truk)
Ny 17 Mey dia ny Andro Lalam-panorenana
Ity andro ity dia ankalazan'ny nosy iray manontolo izay manana fifaninanana amina làlana sy an-tsaha eo amin'ireo boriborintany 5.
Ny 1 Jolay dia ny NPC / RONPhos Handover
Nauru Phosphate Corporation dia naka ny fitrandrahana fosfat sy fandefasana an'i Nauru taorian'ny nividianany izany avy amin'ny British Phosphate Commission. Avy eo RONPhos dia naka ny toeran'ny NPC tamin'ny 2008.
Ny 26 Oktobra dia Andro ANGAM
Midika mody ny Angam. Ity fetim-pirenena ity dia fahatsiarovana ny fiverenan'ireo vahoaka Nauru avy eo amorom-pandringanana. Ny vondrom-piarahamonina tsirairay dia mazàna mandrindra ny fetiny manokana satria ankalazaina miaraka amin'ny ankohonany sy ny olon-tiany ity andro ity.
Rehefa teraka ny zaza dia handova ny foko amin'ny lafiny renin'izy ireo izy. Ny akanjo ho an'ny foko tsirairay dia samy hafa avokoa izay manampy amin'ny famantarana ny olona tsirairay.
Lisitry ny foko Nauru 12:
Eamwit - bibilava / tuna, fetsy, malama, mahay mandainga sy maka tahaka ny fomba.
Eamwitmwit - cricket / bibikely, tsara tarehy tsy misy fotony, milamina, miaraka amin'ny tabataba sy endrika mitovy.
Eaoru - mpandrava, manimba drafitra, karazana fialonana.
Iruwa - vahiny, vahiny, olona avy any amin'ny firenen-kafa, manan-tsaina, tsara tarehy, masculine.
Eano - mahitsy, adala, dodona.
Iwi - voany (lany tamingana).
Irutsi - kanibalisma (lany tamingana).
Deiboe - trondro mainty kely, tezitra, mpamitaka, fitondran-tena afaka miova amin'ny fotoana rehetra.
Ranibok - nosasana ho eny amoron-dranomasina ny zavatra.
Emea - mpampiasa rake, andevo, salama, volo tsara tarehy, manambaka amin'ny fisakaizana.
Emangum - mpilalao, mpilalao sarimihetsika
Ho an'ireo fangatahana visa rehetra ao anatin'izany ireo mpitsidika haino aman-jery mitsidika, ny fangatahana mailaka hiditra ao Nauru dia tokony halefa any amin'ny Immigration Nauru.
Ny dolara aostraliana no fanomezana ara-dalàna ao Nauru. Ho sarotra ny fifanakalozam-bola any ivelany amin'ny toeram-pivoahana rehetra. Ny vola ihany no endrika fandoavam-bola ao Nauru.
Tsy ekena ny carte de crédit / debit.
Misy trano fandraisam-bahiny roa, trano fandraisam-bahiny iray ary trano fandraisam-bahiny iray an'ny fianakaviana.
Misy safidy roa hafa hipetrahana (karazana unit) izay an'ny tompony manokana.
Fahavaratra foana any Nauru, amin'ny ankapobeny manodidina ny taona 20 - tapaky ny taona 30. Ny akanjo fahavaratra dia atolotra.
Ny akanjo fahavaratra / fitafiana mahazatra dia ekena fa raha manao fotoana amin'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta na manatrika fotoam-piangonana dia asaina miakanjo tsara. Ny akanjo baoty dia tsy mahazatra ao Nauru, ny mpilomano dia mety mitafy lamba fehiloha na pataloha fohy.
Tsy misy fitateram-bahoaka. Tolo-kevitra ny fanofana fiara.
Ny voankazo dia voanio, manga, pawpaw, sokay, voankazo, sop masira, pankana. Ny hazo mafy vazimba dia ny hazo tomano.
Misy karazana voninkazo / zavamaniry fa ny be mpampiasa indrindra / ny tiana indrindra dia ny franjipani, iud, hibiscus, irimone (jasmine), eaquañeiy (avy amin'ny hazo tomano), lakolosy emet ary lakolosy mavo.
Ny Nauruans dia mihinana hazan-dranomasina isan-karazany fa ny trondro dia sakafo ankafizin'ny Nauruans hatrany - manta, maina, masaka.
Tsy misy tranga COVID-19 fantatra momba an'i Nauru, tsy nisy tatitra natao tany amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, fa ny governemanta amerikana kosa dia nanoro hevitra ny olom-pireneny fa mampidi-doza io satan'ny tsy fantatra io, eny fa na dia ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka aza.
Misy fitsapana PCR sy / na antigen azo alaina ao Nauru, azo itokisana ary ao anatin'ny 72 ora ny valiny.
Ny vaksinin'ny Oxford-Astra Zeneca dia misy ao amin'ny firenena
Nauru dia manana tantaram-pirenena:
Taloha, nisy lehilahy iray antsoina hoe Denunengawongo. Nipetraka tao ambanin'ny ranomasina niaraka tamin'ny vadiny Eiduwongo izy. Nanan-janaka lahy izy ireo, Madaradar no anarany. Indray andro dia nentin'ny rainy niakatra ho eny ambonin'ny rano izy. Nihodinkodina teo izy mandra-pahatongany tany amoron-dranomasina, izay nahitany tovovavy tsara tarehy antsoina hoe Eigeruguba.
Nentin'i Eigeruguba nody izy, ary nanambady izy roa taty aoriana. Nanan-janaka lahy efatra izy ireo. Ny lahimatoa dia nantsoina hoe Aduwgugina, ny faharoa Duwario, ny fahatelo Aduwarage ary ny faralahy dia Aduwogonogon. Rehefa lehibe ny tovolahy lahy dia lasa mpanjono lehibe izy ireo. Rehefa lasa lehilahy izy ireo dia nipetraka tsy lavitra ny ray aman-dreniny. Rehefa afaka taona maro, rehefa antitra ny ray aman-dreniny, dia niteraka zazalahy hafa ny reniny. Nantsoina hoe Detora izy. Rehefa nihalehibe izy dia tiany ny nijanona niaraka tamin'ny ray aman-dreniny ary nandre ireo tantara nitantara azy ireo. Indray andro, rehefa saiky nihalehibe izy, dia nandeha an-tongotra rehefa nahita lakana. Nankany amin'izy ireo izy, ary nomen'izy ireo ny sasany tamin'ireo trondro kely indrindra azony. Nentiny nody ireo trondro ary nomeny. Ny ampitso, nanao toy izany koa izy, fa tamin'ny andro fahatelo dia nilaza taminy ny ray aman-dreniny handeha hanjono amin'ireo rahalahiny. Ka dia nandeha tamin'ny sambon'izy ireo izy ireo. Rehefa niverina izy ireo ny harivan'iny, dia ny trondro kely indrindra ihany no nomen'ireo anadahy an'i Detora. Nody tany an-trano àry i Detora ary nilaza izany tamin-drainy. Avy eo dia nampianarin'ny rainy azy ny fanjonoana ary notantarainy azy ny momba ny raibe sy renibeny, izay nipetraka tao ambanin'ny ranomasina. Nolazainy taminy fa isaky ny milahatra ny filaharany dia tsy maintsy milentika an'io izy. Ary rehefa tonga tao an-tranon'ireo raibeny sy renibeny izy dia tsy maintsy miditra ary mangataka amin'ny raibeny mba hanome azy ireo farango teny am-bavany; ary tokony holaviny ny farango hafa natolotra azy.
Ny ampitso, nifoha maraina be i Detora ary nankany amin'ireo rahalahiny. Nomeny tsipika fanjonoana misy fatotra marobe ao izy, ary tapa-kazo mahitsy ho farango. Eny amoron-dranomasina dia samy nanipy ny filaharany avy izy ireo, ary, isaky ny avy, dia mahazo trondro ireo rahalahy; fa Detora tsy nahazo na inona na inona. Farany dia reraka izy ary tratran'ny harambato ny filaharany. Notantarainy tamin'ireo rahalahiny izany, fa naneso azy fotsiny izy ireo. Tamin'ny farany dia nilentika izy. Ary raha nanao izany izy, dia nanao anakampo hoe: Lehilahy adala izy, rahalahinay! Rehefa avy nilentika tao an-trano i Detora dia tonga tany amin'ny tranon'ny raibe sy renibeny. Gaga be izy ireo nahita zazalahy toy izany tonga tany an-tranony.
'Iza ianao?' hoy izy ireo nanontany. 'Izaho no Detora, zanakalahin'i Madaradar sy Eigeruguba' hoy izy. Rehefa nandre ny anaran'ny ray aman-dreniny izy ireo dia nandray azy tsara. Nametraka fanontaniana maromaro taminy izy ireo ary naneho hatsaram-panahy lehibe taminy. Farany, teo am-pivoahana izy, nahatadidy izay nolazain'ny rainy taminy, dia nangataka tamin'ny raibeny izy mba hanome azy farango. Nilaza taminy ny raibeny mba handray hook izay tiany ao an-tampon-trano.
Tsy misy COVID i Nauru. Ny sidina indroa isan-kerinandro eo anelanelan'i Nauru sy Brisbane, Aostralia dia mitohy miasa. Ny mpandeha rehetra mankany Nauru dia mitaky fankatoavana mialoha avy amin'ny Governemanta Nauru.
Ireo lehilahy Damo dia nanipy ny filaharany indray, ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nahazo trondro hafa izy ireo. 'Iza no anaran'ity iray ity?' hoy izy ireo nanontany. Ary namaly i Detora, 'Eapae!' Ilay anarana indray no mety. Nahatezitra ireo mpanjono tao Damo izany. Gaga be ny brothes an'i Detora tamin'ny fahaizany. Nanipy ny filaharany i Detora ary naka trondro. Nanontany ny anaran'ireo lehilahy Damo izy. 'Irum' no navalin'izy ireo fa rehefa nijery indray izy ireo dia hitany fa diso izy ireo, satria nisy nodona mainty teo amin'ny faran'ny tsipika. Nanipy ny filaharany indray i Detora ary nangataka azy ireo indray izy ireo hanome anarana ny trondro. 'Eapae', hoy izy ireo. Saingy rehefa nijery izy ireo dia nahita harona henan-kisoa teo amin'ny faran'ny tsipika Detora.
Amin'izao fotoana izao dia natahotra be ireo lehilahy Damo, satria fantatr'izy ireo fa nampiasa majia i Detora.
Nosintomina teo akaikin'ilay iray ilay lakanan'i Detora, ary novonoin'izy sy ny rahalahiny ireo lehilahy Damo ary nalain'izy ireo avokoa ny fitaovam-panjonoany. Rehefa hitan'ny olona teny amoron-dranomasina izany rehetra izany, dia fantany fa ny olony dia resy tamin'ny fifaninanana jono, satria fanaon'izany andro izany ny famonoan'ireo mpandresy amin'ny fifaninanana jono toy izany ny mpanohitra azy sy ny fitaovany. Nandefa lakana hafa àry izy ireo. Toy izany koa no niseho teo aloha, ary raiki-tahotra mafy ny mponin'i Damo ary nandositra ny morontsiraka. Avy eo i Detora sy ireo rahalahiny dia nisintona ny lakany hankany amin'ny morontsiraka. Rehefa tonga teo amin'ny haran-dranomasina izy ireo, dia natondron'i Detora ny lakana niaraka tamin'ireo rahalahiny efatra tao ambaniny; nivadika ho vato ilay lakana. Nidina irery tany amin'ny nosy i Detora. Fotoana fohy taorian'izay dia nihaona tamina lehilahy iray izy izay nanohitra azy tamin'ny fifaninanana amin'ny fanjonoana trondro eo amin'ny haran-dranomasina. Nahita iray izy ireo ary samy nanenjika azy roa. Nahomby tamin'ny fisamborana azy i Detora, ka novonoiny ilay lehilahy iray hafa ary lasa izy. Lavitra ny moron-dranomasina, nandresy tamin'ny fifaninanana ihany koa i Detora, ary namono ilay mpifaninana taminy.
Nizaha ny nosy i Detora izao. Nanjary noana dia nianika voaniho ary nandatsaka voanjo masaka, ilay ronono nosotroiny. Nandritra ny hoditry ny voanio dia nandrehitra afo telo izy. Rehefa nirehitra mafy ny afo dia nanipy nofo voanio izy, ary namofona io. Avy eo dia natory teo amin'ny fasika metatra vitsivitsy miala ny afo izy. Saika natory izy rehefa nahita totozy volondavenona nanatona ny afo. Nihinana ny voanio tamin'ny afo roa voalohany izy io, ary teo am-pihinany ny voanio tamin'ny afo fahatelo dia tratran'i Detora ary hovonoiny. Saingy nangataka tamin'i Detora ny totozy kely mba tsy hamono azy. 'Avelao aho handeha, azafady, fa hilaza zavatra aminao aho', hoy izy io. Navotsotr'i Detora ny totozy, izay nanomboka nandositra nefa tsy nitandrina ny fampanantenany. Noraisin'i Detora indray ny totozy, ary naka sombin-kazo maranitra kely izy, nandrahona ny handefona ny mason'ny totozy. Natahotra ny totozy ary niteny hoe: 'Ahodino avy eo an-tampon'io vatolampy lehibe io vato kely io dia zahao izay hitanao'. Nanakodia ny vato i Detora ary nahita lalana mankamin'ny tany ambanin'ny tany. Niditra tao an-davaka izy ary nandeha tamin'ny làlana tery mandra-pahatongany tamin'ny lalana iray nisy olona nandeha an-tongotra.
Tsy azon'i Detora ny fitenin'izy ireo. Tamin'ny farany dia hitany tamin'ny tovolahy mahay ny fiteniny, ary taminy i Detora nitantara ny tantarany. Nampitandrina azy ny tovolahy manoloana ny loza mety hitranga amin'ny tany vaovao, ary nanoro azy ny lalany. Tonga teo amin'ny toerana iray i Detora, ary hitany fa nisy lampihazo feno fonosana kanto misy endrika kanto. Teo amin'ny lampihazo no nipetraka ny Queen Louse iray, miaraka amin'ireo mpanompony manodidina azy.
Nandray an'i Detora ny mpanjakavavy ary raiki-pitia taminy. Rehefa te-hiverina an-trano i Detora, rehefa afaka herinandro vitsivitsy, dia tsy navelan'ny Mpanjakavavy Louse handeha. Saingy, farany, rehefa nambarany azy ny momba ireo rahalahiny efatra teo ambanin'ny vato izay tsy afaka navotsotra raha tsy tamin'ny ody majika dia navelany handeha. Olona maromaro nihaona taminy no te hanisy ratsy ilay olon-tsy fantatra, saingy nandresy azy rehetra tamin'ny famosaviana ody i Detora.
Ny farany dia tonga teo amin'ilay vatolampy nilaozan'i Detora ireo rahalahiny izy ireo. Niondrika izy, namerina ny famosaviana ody, ary niova ho lakana misy ireo rahalahiny efatra ilay vatobe. Niara-niondrana an-tsambo ho any amin'ny taniny izy mirahalahy.
Rehefa afaka andro maromaro teny an-dranomasina, dia hitan'izy ireo teny lavitra ilay nosy niaviany. Rehefa nanakaiky an'io izy ireo dia nilaza tamin'ny mpirahalahy i Detora fa handao azy ireo izy ary hidina hipetraka miaraka amin'ny raiben'izy ireo amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Niezaka nanery azy hitoetra tao amin'izy ireo izy ireo, saingy nitsambikina teo ambonin'ny sisin'ilay lakana izy, ary nidina. Tonga teny amin'ny ray aman-drenin'izy ireo izy ireo ary nitantara ny zava-niainany.
Rehefa tonga tao an-tranon'ireo raibe sy renibeny i Detora, dia noraisin'izy ireo tsara izy. Taorian'ny fahafatesan'ny raibe sy renibe dia lasa mpanjakan'ny ranomasina i Detora ary ny fanahin'ny jono sy ny jono. Ary amin'izao fotoana izao, isaky ny very fanjonoana na farango amin'ny lakana, dia fantatra fa mihohoka eo ambonin'ny tampon-tranon'i Detora izy ireo.